Allgedo.com » 2012 » October » 22
Home » Archive Daily October 22nd, 2012
Wafdi ka socda QM oo gaaray Magaaladda Kismaayo
Wararka naga soo gaaraya Magaaladda Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in halkaas ay maanta gaareen wafdi ka socda QM. Wafdigan ka socda QM ayaa waxaa ay kasoo anbabaxeen Magaaladda Nairobi ee dalka Kenya, waxaana halkaas gaysay diyaarad gaar ah. Saraakiil katirsan kuwa dowlada, Raaskambooni iyo kuwa Amisom ayaa ka qeyb qaatay soo dhaweynta Wafdigan Hay’adaha QM ka socda. Wararka...
Ra’isul Wasaaraha dowlada oo lakulmay Ururada Haweenka “Daawo Sawirada”
Ra’isul Wasaaraha dowlada Soomaaliya Dr Saacid Faarax Garaad ayaa kulan gaar ah maanta xafiiskiisa kula qaatay Ururada Haweenka. Kulankan ayaa waxaa ay uga wada hadleen doorka Haweenka ay ku leeyihiin Xukumada cusub ee lafilayo in dhawaan uu ku dhawaqo Ra’isul Wasaare Dr Saacid. Markii kulanka uu soo dhamaaday ayaa waxaa saxaafada war siiyay Cabdi Xaaji Goob-doon isagoo sheegay in kulanka...
Ra’isul Wasaare Dr Saacid oo ku dhawaaqi doona xukumadiisa iyo nooca ay noqon doonto “Top News”
Ra’isul Wasaaraha dowlada Soomaaliya Dr Saacid Faarax Garaad ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan uu ku dhawaaqo Xukumadiisa cusub. Warar aynu ka helnay Madaxtooyada ayaa xaqiijinaya in lasoo gaba gabeeyay kulamadii ugu danbeeyay ee ay madaxda dowlada ka lahaayeen soo dhisada xukumada cusub. Ra’isul Wasaaraha dowlada Dr Saacid Faarax, Madaxweyne Pro Xasan Sh iyo Gudoomiyaha barlamaanka Pro...
Hay’ada Nabad sugida oo soo bandhigtay dhalinyaro Shabaab ah
Hay’ada Nabad sugida gobolka Banaadir ayaa soo bandhigay Dhalinyaro katirsan Kooxda Shabaab kuwaas oo lagu qabtay hub iyo waxyaabaha qarxa. Xarunta Nabad sugida ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo bandhigau ilaa 35 dhalinyaro ah kuwaas oo lala xariirinayo Shabaab. Taliyaha Nabad Suga Gudida Khaliif Axmed Ereg ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen Ragg gaaraya 35 Nin , isagoo hadalkiisa sii raaciyay...
Madaafiic iyo dagaal ka dhacay Magaaladda Afmadow
Wararka naga soo gaaraya Magaaladda Afmadow ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay dagaal xooggan iyo Madaafiic. Al-Shabaab ayaa madaafiic ku weeraray gudaha Magaaladda gaar ahaan fariisimo ay ciidamada dowlada iyo kuwa Amisom ku leeyihiin Bartamaha Magaaladda. Markas kadib ayaa waxaa dhacay dagaal xooggan kaas oo soconayay in mudo ah sida ay sheegen dad kusugan Magaaladda. Lama...
Amisom oo loo fasaxay in ay ka hortagto Kooxaha dhibaatada ka wada Magaaladda Marka
Maamulka dowlada Soomaaliya ee Magaaladda Marka ayaa sheegay in ay sii badanayaan dhibaatada ay ciidamada dowlada u gaysanayaan dadka shacabka ah. Gudoomiye ku Xigeenka Arrimaha Bulshada ee Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Cilmi ayaa sheegay in ciidamada Amisom ay u fasaxeen in ay ka hortagaan kooxaha falalka amaan xumada ah gaysanaya. “Waxaa kusoo banadaya Marka iyo magaalooyinka...
Gudoomiyaha Magaaladda Baydhabo oo isku day dil ka bad baaday
Magaaladda Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa xalay waxaa ka dhacay weerar loo gaystay guriga gudoomiyaha dowlada ee Magaaladaas. Weerarkaas ayaa waxaa lagu qaaday guriga uu Baydhabo Xasan Maxamed Biikolo waxaana lasoo sheegayaa in qasaaro uu ka dhashay. Hub aad uculus ayaa lagu weeraray guriga gudoomiyaha, waxaana la sheegay in ay gaysteen Shabaab. Ciidamada Ilaalada ee Hoyga Gudoomiyaha Magaalada...
Weerar lagu qaaday ciidamada dowlada ee Kismaayo
Wararka naga soo gaaraya Magaaladda Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in halkaas xalay uu ka dhacay qarax qasaaro gaystay. Sida ay Warbaahinta AOL usheegeen dad kusugan Kismaayo ciidamada ayaa waxaa qaraxa lagula eegtay xarunta Maamulka ee Magaaladda Kismaayo. Lama Oga qasaaraha ka dhashay weerarkaas lagu qaaday ciidamada dowlad iyo kuwa Raaskambooni. Ciidamada dowlada ayaa saakay howlgalo...
Ururka horumarinta ardeyda Beesha SADE ee SASDO hawlihii uu ka qabtay Dalka gudihiisa iyo dibadiisa.
Ururka horumarinta Ardayda Beesha Sade (SASDO) hawlihii uu ka qabtey dhanka wacyi gelinta kana kooban dhowr qeybood oo kala ah: Wax barashada, nabadda, caafimaadka, isku xirka bulshada iyo ciyaaraha (sports). Ururka waxaa u qabsoomay dhowr ka mid ah hadafyadii loo aasaasey, wuxuuna diiradda saaray oo uu fuliyey hawl xiliyeedyo iyo waxqabad dhab ah. Ururka oo kaashanaya gudigiisa fulinta ayaa...